HCDDED: “Misy lalàna ny fanaovan’ny depiote tatitra” | NewsMada
“Misy lamina tsy maintsy arahina ny famoriam-bahoaka” hoy ny filohan’ny HCD­DED), i Navony Pierre Le­noble.
Mahazo mamory olona any amin’ny faritra misy azy ny depiote. Voafidy amin’ny toerana iray izy, ary manao tatitra ny zava-bita. Depioten’i Madagasikara no anarany fa voafidy amin’ny toerana iray izy. Tsy ny depiote voafidy tany Toliara, ohatra, no hanao tatitra any Mahajanga.
Rehefa mifidy lalàna, izy no manana izay fivelarana eo amin’ny firenena izay maha depioten’i Madagasikara azy. Misy koa ny fangatahana mialoha ho an’ny olona anaovana tatitra, izay angatahina any amin’ny prefet. Misy lalàna mifehy azy izay fanaovana tatitra izay fa atao avy hatrany.
Andehanana haingana amin’ny fampandrosoana ny demokrasia
“Fitsipika iray ahazoana mandeha haingana amin’ny fampandrosoana ny firenena ny demokrasia”, hoy izy mo­mba ny gazety boky lah.8, na­voakan’ny HCDDED, ahitana ny momba ny demokrasia.
Mandalao zava-tsarotra ny firenena amin’izao fotoana izao, efa tarazo ela. Tsy inona fa ny kolikoly, izay toy ny olitra ngezabe. Samy voafatotra ao anatiny avokoa ny rehetra: ny olom-boafidy, ny olom-boatendry… Noho izany, iaraha-mamaha izany olana lehibe mihatra amin’ny firenena iza­ny. Tsy hoe ny mpitondra re­he­fa no lo sy tsy mahavo. Mi­sy manana finiavana tsara ao, fa be no ho ny vitsy ka mila ampian’ny rehetra.